အလုပ်အမှုဆောင်ခရီးသွားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းဒက်ထရွိုက်, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးမီချီဂန် Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 313-241-3500 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကယ်ဖို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူ. စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုပေးထားသောအခြေအနေအရဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမဟုတ်မှန်လျှင်အဘယျသို့? သင်လမ်းယူရန်ရှိသည် Do? သငျသညျဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ဖို့အချိန်အများကြီးယူမယ်လို့စေခြင်းငှါ. ငှားရမ်းလေယာဉ်ပျံဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်ကယ်ဆယ်ရေးမှကြွလာဘယ်မှာဤသူကား. ပဲဖုန်းခေါ်သူတို့သည်သင့်အဘို့အဆင်သင့်နေတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ. သငျသညျကံကောင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ပင်တတ်နိုင်ဗလာခြေထောက်သဘောတူညီချက်ရှာတှေ့နိုငျ. အခုအချိန်မှာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ် Give 313-241-3500
Chartered ဘဏ်ဟာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုကျော်အများအပြားအားသာချက်များရှိသည်. ဒါကြောင့်စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုစရိတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ သာ. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်သော်လည်း, အစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသင့် Beck နှင့်ခေါ်ဆိုခမှာရရှိနိုင်ပါ. သင်တစ်ဦးစင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုငှားကြလျှင်, သင်အချိန်မဆိုပေးထားမှာပျံသန်းဖို့သင့်ရဲ့လေယာဉ်အဆင်သင့်ရှိသည်နိုင်. သင်ကအချိန်ဇယားနှင့် ပတ်သက်. နှောင့်ရှက်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်နှငျ့သငျယူ-off နဲ့ဆင်းသက်ဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ရက်သတ်မှတ်နိုင်သည်. သင်တစ်ဦးအသစ်နဲ့လက်ထပ်စုံတွဲတွေဟာလျှင် privacy ကိုသင်တို့အဘို့အအရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မယ်. သင်တို့ပတ်လည်ဘယ်သူမှနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့ချင်ပါတယ်. တစ်ဦးကစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသင် privacy ကိုဒီလိုမျိုးမပေးလိမ့်မည်သူတို့ပြုပါလျှင်ပင်, တကကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မားလာလိမ့်မယ်.
ဇိမ်ခံကားလေယာဉ်ငှားရမ်းဒက်ထရွိုက်နှင့်အတူ, သငျသညျသငျသညျမြျှောလငျ့အစားအစာအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, သငျသညျခငျြအရက်များနှင့်အသငျသညျတလျှောက်ယူချင်အမှုထမ်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေအရေအတွက်၏အမှတ်တံဆိပ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအားလုံးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. သင်လိုင်စင်နှင့်စက္ကူအလုပ်ကိုရှိပါကသင်ပင်တစ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ကိုပထမဆုံးစတင်စမ်​​းသပ်အကောင်အထည်စေခြင်းငှါ. အဘယ်ကြောင့်ဒက်ထရွိုက်အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းမ?
အခြားတည်နေရာကျွန်တော်တို့ပတ်လည်အစေခံ ဒက်ထရွိုက်, MI ဧရိယာ
ဒက်ထရွိုက်, မီချီဂန် 48243
ဒက်ထရွိုက်, အဘိဓါန် Highland ပန်းခြံ, Hamtramck, Hazel ပန်းခြံ, Ferndale, Dearborn, Warren, သာယာသော Ridge, သပိတ်ပင်ပန်းခြံ, တော်ဝင် Oak, Huntington ဝုဒ်, စင်တာလိုင်း, Madison မြင့်, Southfield, မြစ် Rouge, Melvindale, Berkley, gross Point, Harper ကိုဝုဒ်, ရက်ဖော့, Eastpointe, Ecorse, Dearborn မြင့်, Clawson, Allen ကပန်းခြံ, လင်ကွန်းပန်းခြံ, စိန့် Clair Shore, Roseville, Troy, Franklin, ဘာမင်ဂမ်, Sterling မြင့်, Inkster, ဥယျာဉ်ကိုစီးတီး, ဖရေဆာ, Farmington, Livonia, Wyandotte, Southgate, တေလာ, Bloomfield မှာတောင်ကုန်း, Westland, ကလင်တန်မြို့နယ်, ဝိန်း, ဥတီဂ်, အနောက် Bloomfield, gross Ile, Trenton, တဲ့ Romulus, တောင်ပေါ်မှာ Clemens, အသစ်, Rochester, Harrison မြို့နယ်, Canton, Pontiac, Plymouth, Keego ဆိပ်ကမ်း, Northville, Macomb, Auburn တောင်တန်းများ, ပြည်ထောင်စုရေကန်, flat ရော့ခ်, ခိုင်ခံ့ရေကန်, Waterford, Rockwood, နယူးဘော်စတွန်, Belleville, ဝါရှင်တန်, Wixom, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းမြို့နယ်, နယူး Baltimore, တောင်ပိုင်း Rockwood, ရေကန် Orion, White ကရေကန်, Ypsilanti, Oakland, Clarkston, Drayton Plains, ရောင်ခြည်, ဦးနှောက်ကျွန်း, Carleton, နယူး Hudson, Milford, နယူး Haven, Lakeville, တောင်ပိုင်းလိုင်ယွန်, Newport, Anchorville, Willis, အောက်စဖို့ဒ, Romeo, တရားမျှတသော Haven, Whittaker, အမ်း Arbore, Leonard, အဘိဓါန် Highland, Algonac, Davisburg, Armada, မွန်ရိုး, Maybee, သံခမောက်, Whitmore ရေကန်, Richmond, Brighton, Ortonville, ဟမ်းဘတ်, Hartland, မီလန်, Lakeland, မရိန်းစီးတီး, Almont, Dryden, ဆား, Holly, ကိုလံဘတ်စ်, Allenton, Metamora, အရှေ့တရုတ်, Azalia, နောဖမြို့,့Dexter, Dundee, Goodrich, la Salle, ဆောင်း, မွေပုံစာအုပျ, Fenton, Pinckney, Ida, စိန့် Clair, luna ဆိပ်ခံတံတား, အဖုံး, Howell, Goodells, သပိတ်ပင် Grove, Imlay စီးတီး, Britton, ပီတာစဘတ်, Emmett, ဂရန်း Blanc, Attica, Linden, အီရီ, ရစ်ချ်ဝေးမောင်နှံ, Lapeer, Bridgewater, Smith အဘိဓါန် Creek, ချယ်လ်ဆီး, ရှမာရိမြို့, Deerfield, Marysville, Burton, ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်း, ကလင်တန်, ဂရက်ဂိုရီ, Davison, Tecumseh, ကျွန်းစိန့်ဂျော့ခ်ျ, မန်ချက်စတာ, Cohoctah, မီးကျောက်, ဆိပ်ကမ်းကြည့်ရန်, Avoca, Toledo, Lambertville, အော်ရီဂွန်, မြောက်ကိုရီးယားလမ်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာသွင်းထား, အကျိုး, Byron, ဆိပ်ကမ်း Huron, Fowlerville, အော့တဝါရေကန်, Swartz ကို Creek, ရီဂါ, Blissfield, Palmyra, Sylvania, ဝိန်း Fort Gratiot, Durand, Adrian, Lennon, Bancroft, Berkey, ဖလပ်, Vernon, နဂါး, Metamora, Corunna, လီယွန်